Nkọwa n'etiti Huawei P40 na Samsung Galaxy S20 | Akụkọ akụrụngwa
Dị ka atụmatụ, Huawei kwupụtara ọkwa Huawei P40 ọhụrụ, ọkwa ọhụrụ nke nwere akara atọ: Huawei P40, P40 Pro na P40 Pro Plus. N’ọnwa gara aga ka enyere ọkwa Galaxy S20 ọhụrụ, gụnyere usoro atọ: Galaxy S20, S20 Pro na S20 Ultra.
Ugbu a nsogbu ahụ bụ maka onye ọrụ, onye ọrụ nke na-ahụ ọtụtụ onyinye dị na njedebe nke ahịa telephony, ọ na-esiri ya ike ịhọrọ nke bụ ọnụ na-adabara gị mkpa. Ọ bụrụ na i doghị anya banyere ya ma nwee obi abụọ n'etiti Samsung ma ọ bụ Huawei, isiokwu a ga-egosi gị ihe dị iche na etiti ọ bụla.
1 Samsung Galaxy S20 na Huawei P40
2 Samsung Galaxy S20 Pro na Huawei P40 Pro
3 Samsung Galaxy S20 Ultra na Huawei P40 Pro +
4 Enweghị ọrụ Google
Samsung Galaxy S20 na Huawei P40
Ihuenyo 6.2-anụ ọhịa AMOLED - 120 Hz 6.1 inch OLED - 60 Hz
Nhazi Snapdragon 865 / Exynos 990 Kirin 990 5G
Ebe nchekwa RAM 8 / 12 GB 6 GB
Nchekwa ime 128 GB nke UFS 3.0 128 GB
Rear igwefoto 12 mpx isi / 64 mpx telephoto / 12 mpx obosara 50 mpx isi / 16 mpx ultra wide angle / 8 mpx telephoto 3x mbugharị
Igwe n'ihu 10 mpx 32 mpx
Usoro njikwa A gam akporo 10 nwere otu UI 2.0 Gam akporo 10 ya na EMUI 10.1 ya na Huawei Mobile Services
Batrị 4.000 mAh - na-akwado ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ 3.800 mAh - na-akwado ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ
Njikọ Bluetooth 5.0 - WiFi 6 - USB-C - NFC - GPS Bluetooth 5.0 - WiFi 6 - USB-C - NFC - GPS
Nche mkpisiaka agụ n'okpuru ihuenyo mkpisiaka agụ n'okpuru ihuenyo
Ahịa 909 euro 799 euro
Anyị na-amalite site na ntinye ntinye na njedebe abụọ, ọ bụ ezie na nke ahụ apụtaghị na ha bụ ọnụ maka mmefu ego niile. Modelsdị abụọ ahụ nzọ na ihuenyo nke 6.2 na S20 na 6.1 na P40, ya mere nha ihuenyo ahụ ọ bụghị ajụjụ a ga-ewere dị ka nhọrọ dị iche.
Ihe dị iche ma ọ bụrụ na anyị achọta ya n'ime. Ọ bụ ezie na Galaxy S20 na-ejikwa 8 GB nke RAM, yana nhọrọ nke 12 GB naanị na ụdị 5G, Huawei P40 na-enye anyị naanị 6 GB nke RAM. Ihe ọzọ dị iche bụ na onye nhazi Huawei dakọtara na netwọkụ 5G, ebe Snapdragon 865 na Exynos 990 nke Galaxy S20 na-akwụghị euro 5 karịa mbipute 100G.
Na ngalaba foto, anyị na-ahụ ese foto atọ na nke ọ bụla n'ime ụdị a:
Isi ụlọ 12 mpx 50mpx
Igwefoto zuru oke 12 mpx -
Igwefoto dị elu sara mbara - 16 mpx
Igwefoto Telephoto 64 mpx 8 mpx 3x ngwa anya mbugharị
Batrị ha abụọ bụ otu ihe ahụ, 4.000 mAh nke S20 maka 3.800 mAh nke P40, ha abụọ na-enye sistemụ ngwa ngwa ngwa ngwa ma eriri ma ikuku na mkpisiaka agụ n'okpuru ihuenyo.
Samsung Galaxy S20 Pro na Huawei P40 Pro
Ihuenyo 6.7-anụ ọhịa AMOLED - 120 Hz 6.58 inch OLED - 90 Hz
Ebe nchekwa RAM 8 / 12 GB 8GB
Nchekwa ime 128-512 GB UFS 3.0 256 GB gbasaa site na NM Card
Rear igwefoto 12 mpx isi / 64 mpx telephoto / 12 mpx obosara / TOF sensor 50 mpx isi / 40 mpx ultra wide / 8 mpx telephoto na 5x ngwa anya mbugharị
Batrị 4.500 mAh - na-akwado ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ 4.200 mAh - na-akwado ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ
Ahịa site na euro 1.009 999 euro
S20 Pro na-enye anyị ihuenyo AMOLED nke anụ ọhịa 6.7 ​​nke anụ ọhịa ahụ nwere ọnụego ume 120 Hz, ebe na P40 Pro ihu igwe ahụ bụ OLED, na-eru 6.58 sentimita na 90 Hz ume. Modelsdị abụọ a na-ejikwa ya otu nhazi dị ka Galaxy S20 na P40: Snapdragon 865 / Exynos 990 maka S20 Pro na Kirin 990 5G maka Huawei P40.
RAM nke ngwaọrụ abụọ ahụ bụ otu 8 GB, n'agbanyeghị na ụdị 5G nke Samsung, nke a ruru 12 GB, na nke anyị ga-akwụ ụgwọ karịa 100 euro. Oghere nchekwa nke S20 Pro na-amalite site na 128 ruo 512 GB, na usoro UFS 3.0. P40 Pro dị naanị na 256GB nchekwa.
Igwefoto n'ihu nke S20 Pro bụ otu ihe ahụ nke ụdị ntinye, yana 10 mpx nke mkpebi maka mpx 32 nke igwefoto n'ihu nke P40 Pro. Na azụ, anyị na-ahụ igwefoto 3 na 4 n'otu n'otu.
Igwefoto dị elu sara mbara - 40 mpx
Igwefoto Telephoto 64 mpx 8 mpx 5x ngwa anya mbugharị
Ihe mmetụta TOF Si Si
Otu n’ime nsogbu kachasị mkpa maka ọtụtụ ndị ọrụ batrị bụ batrị batrị ruru 4.500 mAh na S20 Pro na 4.200 mAh na P40 Pro. Ha abụọ dakọtara na ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ. A na-achọta akara mkpisi aka n'okpuru ihuenyo na ụdị abụọ ahụ.
Samsung Galaxy S20 Ultra na Huawei P40 Pro +
Ihuenyo 6.9-anụ ọhịa AMOLED - 120 Hz 6.58 inch OLED - 90 Hz
Ebe nchekwa RAM 16 GB 8GB
Nchekwa ime 128-512 GB UFS 3.0 512 GB gbasaa site na NM Card
Rear igwefoto 108 mpx isi / 48 mpx telephoto / 12 mpx obosara / TOF sensor 50 mpx isi / 40 mpx ultra wide angle / 8 mpx telephoto mbugharị 3x ngwa anya / 8 mpx telephoto mbugharị 10x ngwa anya / TOF
Igwe n'ihu 40 mpx 32 mpx
Batrị 5.000 mAh - na-akwado ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ 4.200 mAh - na-akwado ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ
Ahịa 1.359 euro 1.399 euro
Galaxy S20 Ultra bụ naanị ụdị dị na S20 dị naanị na nsụgharị 5G, yabụ ọ bụ naanị ya nwere ike mpi na nha anya kwesiri nwere ụdị kachasị elu na mpaghara P40, P40 Pro Plus.
Igwe S20 Ultra na-eru 6.9 sentimita, bụ AMOLED wee rute a 120Hz na-enye ume dị ka S20 niile. Maka akụkụ ya, P40 Pro + na-enye anyị otu nha ihu nha anya dịka P40 Pro, sentimita 6.58 nwere otu ume ọhụrụ, 90 Hz.
Ebe nchekwa RAM nke S20 Ultra ruru 16 GB maka 8 GB nke P40 Pro +, nke bụ okpukpu abụọ nke ụdị Huawei. Igwefoto n'ihu nke S20 Ultra bụ 40 mpx ka nke P40 Pro + bụ 32 mpx. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka igwe foto n’azụ, anyị ga-ahụ kamera azụ 3 na 4 n’otu n’otu.
Isi ụlọ 108 mpx 50mpx
Igwefoto Telephoto 48 mpx 8 mpx 5x ngwa anya mbugharị / 8 mpx 10x ngwa anya mbugharị
Ihe mkpịsị aka na-agụ dị n'okpuru ihuenyo, dị ka ụdị ndị ọzọ. Batrị S20Ultra ruru 5.000 mAh maka 4.200 mAh nke P40 Pro +.
Enweghị ọrụ Google
Nsogbu nke Huawei na-eche ihu, ọzọ, ya mere ndị ahịa ya n'ọdịnihu, bụ na ọzọ, dị ka o mere na Mate 30, ụdị ọhụrụ Hauwei P40 nwetara Huawei Mobile Services (HMS) kama ọrụ Google.
Nsogbu nke a na-anọchi anya dị na nke ahụ anyị agaghị ahụ Google ngwa ọ bụla ma ọ bụ ngwa ndị a kacha eji eme ihe gburugburu ụwa dịka WhatsApp, Facebook, Instagram na ndị ọzọ na App Gallery, ụlọ ahịa ngwa ahịa dị na ọdụ ndị a.
Ọ dabara nke ọma ọ bụghị ihe dị mgbagwoju anya iji wụnye ọrụ Google na-enyocha ịntanetị, yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ụfọdụ ọdụ ọhụrụ nke Huawei gosipụtara, ịghara inwe ọrụ Google ekwesịghị ịbụ nsogbu ị ga-ebu n'uche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Nkọwa n'etiti Huawei P40 na Samsung Galaxy S20
Nke a bụ Xiaomi Mi 10 Pro na ngwaahịa ọhụụ niile